महिनावारी हुँदा विद्यालय आउन गाह्रो भएकाले विद्यालयमा किशोरीलाई सेनेटरी प्याड वितरण – Sanghiya Online
आज विजयनगर गाउँपालिकाको वडा नं. ७ को लौटनराम द्रोपतीदेवी मावि.गणेशपुर मा सेनेटरी प्याड लैङ्िगक शिक्षक प्रीती चौधरी लाई वितरण को लागि हस्तान्तरण गरिएको छ ।
किशोरीहरुलाई महिनावारी हुँदा विद्यालय आउन गाह्रो हुने भएकोले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीलाई सेनेटरी प्याड वितरण गरिएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापाले यसले विद्यार्थीहरु नियमित विद्यालय आउनुको साथै शैक्षिक विकासमा सुधार आउने बताउनु भयो । गाउँपालिकाबाट प्रत्येक मा.वि. र नि.मा.वि.लाई नियमित उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भयो ।
मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम समितिका सिफारिस सदस्य सरिता अर्यालले महिनावारी भएको बेला किशोरीलाई नियमित विद्यालय जान प्रोत्साहन मिल्ने बताउनु भयो । रजस्वलाले पढाईलाई कुनै प्रभाव नपर्ने विश्वास अर्यालले व्यक्त गर्नु भयो । सेनेटरी प्याड लौटनराम द्रोपदी मा.वि.गणेशपुरबाट वितरण सुरु गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
यस्तै वडा अध्यक्ष दिनेश कुमार चौधरीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सिर्जनात्क र अतिरिक्त कार्यक्रमका लागि आफु सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ । महिनावारी हुँदा धेरै किशोरीहरु लाज मान्ने पनि भएकाले बेलाबेलामा आवश्यक सल्लाह सुझाव समेत दिन अनुरोध गर्नु भएको छ ।
कार्यक्रम गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापाको प्रमुख अतिथ्यता, मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम समितिका सिफारिस सदस्य सरिता अर्याल, वडा अध्यक्ष दिनेश कुमार चोधरी, प्रधानाध्यापक श्याम प्रकाश चौधरीको अतिथ्यता, लौटनराम द्रोपदी देवी मा.वि. व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रघुनाथ चौधरीको अध्यक्षता र राम प्रघट कोरीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।